गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने महिलाको पीडा – दशैं दशा बनेर गयो तिहार कसरी मनाउने ?
सुर्खेत –उमेर ६० वर्ष, त्यसमाथि शारीरीक अपाङ्गता । त्यति हुँदाहुँदै पनि तीता कामी कर्णाली नदीको तीरमा गिट्टी कुटेर ५ नातिनातिना सहितको परिवारको गुजारा गरिरहेकी छन् ।
आठबीस नगरपालिकाको केन्द्र राकम कर्णालीको तार बजारमा उनले यसरी गिट्टी कुट्न थालेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । हातैभरी ठेला उठेका छन् ।
हरेक दिन उनको आँखामा गिट्टीका साना टुक्राहरू पसेर हैरान गराउँछन् । उनलाई कहिले काहीँ लाग्छ, यस्तो जिन्दगी जिएर के नै गर्नु ? तर उनमा हिम्मत भने ठूलो छ ।
मरुञ्जेल गिट्टी नै कुटेरै भए पनि जिन्दगी जिउने अठोट उनको छ ।
उनका श्रीमान हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । छोराबुहारी भारतमा बस्दै आएका छन् । नातिनातिनालाई उनले नै लालनपालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नातिनातिना नजिककैको जनमाविमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
‘हामीलाई जीवन गुजार्ने अन्य कुनै पनि विकल्प नै भएन,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा ज्याला मजदूरी गर्न अपाङ्गता भएका कारण कोही कसैले बोलाउँदैनन् । बोलाए पनि शरीरको अवस्थाले समस्यामा पारिरहेको छ ।’
उनले लोकान्तरसँग दु:खेसो पोखिन्, ‘हाम्रा लागि त न सरकार छ, न त आफन्त नै बरु नदी किनारका ढुंगा नै आफन्तजस्तो लाग्न थालिसकेको छ ।’
उनले गत वर्ष नगरपालिकाले ४ सय रुपैयाँ दिएको समेत बताइन् ।
उनीसँगै गिट्टी कुट्ने रंगा विकले आफूहरूलाई दशैं नआएको बताइन् ।
‘दशैं त हुनेखानेहरूका लागि पो हो त,’ उनले भनिन, ‘हाम्रा लागि त दशैं दशा बनेर आउँछ ।’ उनले तीन महिना लगाएर एक ट्याक्टर गिट्टी कुट्ने गरेको बताइन् ।
‘एक ट्याक्टर गिट्टी कुट्न तीन महिना लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही एक ट्याक्टर गिट्टी बेचेर आएको चार हजार रुपैयाँले के को दशैं मान्नु ?’
एक आँखा नदेख्ने रंगाले नगरपालिकाले कर उठाउँदा आफूलाई कम पैसा मिल्ने गरेको बताइन् ।
‘हामीलाई सस्तोमा गिट्टी बेच्न नगरपालिकाले बाध्य बनाएको छ । अहिले नगरपालिका भएपछि ५ हजारमा हामीले बेच्ने गिट्टी ४ हजारमा झरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले रगत मिसाएर बनाएको गिट्टीको मूल्य समेत सही पाउन सकेका छैनौं । जसले पनि लिन्छ उसैको मूल्यमा हामीले बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
उक्त किनारमा १५ जनाले नियमित रूपमा गिट्टी कुट्दै आइरहेका छन् । ‘दशैं त गयो अब आउने तिहार कसरी मनाउने हो चिन्ता लागिरहेको छ,’ रमा विकले भनिन्, ‘यी पर्वहरू त हाम्रा लागि नआइदिएकै बेस हुन्थ्यो ।’